Xirsi Iyo Xulufadiisu Saanbuus Laga Eedaamay Iibiyaan ( Abdishakur Gande ) | Awdalmedia.com
Nin baa laga hayay duco ahayd "ilaahow hebel waxsii anana wax ha nasiiye". Hadda, allah ayaa damaanad qaaday arsaaqda qofwalba calmanayo.
Haddaba, Xirsi iyo xuluufadiisa isbedel-doon baanu nahay leh xisbiga kulmiye may diidin oo kuwii gudaha guriga kujiree talada dalka loo tuhmayay ahaayeen balse sababta dudmadoodu mabay qarsoonayn oo waakuwii caday oo ahayd in ay diidan yihiin "Muuse Biixi oo madaxwaynaha dalka ah" subxaanaka yaa cadiin hada taasii waa qoraal eebo rabi baa hore u xakumee muuse madaxwayne noqon maayo miyaanay danbi ahayn?
Muusr diiddoow dilaac...
Wuxuunbay istuseen oo ay rabitaankooga ku dharjiyeen in jiritaankooga siyaasadeed lumi doonno hadii muuse la doorto sidaadarteed dee maanta shacabka kuma qancin karaan isbedel-doon baanu nahay waayo waxay xisbiga waddani kudoor bideen si'ay danahooga gaarka ah uga meel marsadaan waayo hadday isbedeldoon yihiin intaasoo sanay midida daabkeega hayeen...
Wiil baa gabadh uu aqaanat kuyidhi " waan ku aqaannaa!!!" ilayn shaw, dumarku na neceb yihiin weedha ah "Waan ku aqaanna" gabadhii baa iyadoo dagaalamaysa tidhi maxaad igu taqaannaa ma tuugad baan ahay?. KKkkk suu wiilkii ilayn wuuba garanayee ugu jawaabay "eegga, iyadaa qaar iskuba cadaysay waxay ahaydee!!!".
Muuse Biixi wuu garanayaa ex-wasiir xirsi oo aynu wada ogsoonahay fahmi na karno ujeedaduu wadani ugu biiray inay tahay si'uu umeelmarsado danahiisa gaarka ah oo dagaalka uu kujiraa na isdifaac iyo majarahabaabinta uu maskaxdeena ficiladuu wado ku cabirayo... taasoo, caqligeena liidaysa ceeb na ku noqonaysa kala doorashadeena.
Haddaad tahay, isbedel-doon ma haysaa amase ujeedaa isbedel ka wanaagsan barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye oo doorato kulana xisaabtanto? Maya oo maya.... dee xaqiiqodiid na waa garaad gudhay iyo caqliyo ceebaysan.
Halkuu tegay na wax tari maayo oo halkuu ka tagayba wax ma tari jirin :-D .... Xigasho wasiir Mustafe F Abraar (Dhoore) mar uu ka hadlaayay saamayntuu lahaa nin iska tegayoo la tabin hore na loo tirsan jirin.